Iran: iza no mangalatra ireo sary vongana varahina? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Mey 2010 22:03 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, македонски, عربي, Español, English
Azo tarafina fa tany ahitana zavatra tsy ampoizina i Iran ary azo heverina fa tsy ho tapitra vetivety ireny. Nolazain'ny filazam-baovao iraniana sy avy any ivelany fa antony ara-pivavahana no ao ambadiky ny fahaverezan'ireo sary vongan'ny mahery fo iraniana 11 vita amin'ny varahina ireo.
Anisan'ireo sary vongana very ny an'i Mohammad Moin, olo-malaza amin'ny fampianarana momba ny fiteny, (sary eo ankavanana avy ao amin'ny vohikalam-baovaon'ny Mehr) sy ny an'i Sattar Khan, olo-malaza tamin'ny Revolision'ny Lalàmpanorenana iraniana , (sary eo ankavia avy ao amin'ny vohikalam-baovaon'ny Mehr), very teo amin'ny zaridainan'ny daholobe tao an-drenivohitra iraniana izy ireo.
Mokhtasatehonar, miteny[fa] miharo hanihany:
Ny mangalatra sary vongana maromaro dia lasa zavatra mpiseho ary efa manomboka zatra an'izany ny olona… Ny tompon'andraikitra ao amin'ny kaominina, raha tokony hanao izay hampitsaharana ny halatra no ataony, dia ilaozany manazava amin'ny fampahalalam-baovao indray fa hoe andian-jiolahy efa za-draharaha sady voalamina tsara no manatanteraka ny halatra…Ohatry ny hoe tsy mahatakatra ny iraniana fa ny mangalatra sary vongana milanja 400Kg amin'ny andro antoandro dia ho hain'ny mpangalatra rehetra.
Mpitoraka bilaogy hafa, Ebhamlink, namoaka ny sarin'ireo sary vongana mbola tsy nisy nangalatra.
Ary Noghrei Nevesht nanoratra [fa]
Tsy nisy nangalatra ireo sary vongana ireo fa mpitondra fivavahana iray no nanome baiko hanala azy ireo eny amin'ny toerana falehan'ny daholobe. Raha nanao izany mazava tsara mantsy izy dia mety ho tsy hanaiky ny olona. Ankehitriny dia natao amin'ny anarana hoe halatra izany.
Manontany ny mpitoraka bilaogy raha nisy nangalatra ireo sary vongana ireo na “nanjavona”. Na ilay voalohany ny ilay faharoa dia mampalahelo daholo.